तिहारमा फोटो र भिडियो धेरै खिचेर स्मार्टफोनको स्टोरेज भरियो ? यसरी खाली गर्नुस् फोनको स्टोरेज - Technology Khabar
» टिप्स » तिहारमा फोटो र भिडियो धेरै खिचेर स्मार्टफोनको स्टोरेज भरियो ? यसरी खाली गर्नुस् फोनको स्टोरेज
तिहारमा फोटो र भिडियो धेरै खिचेर स्मार्टफोनको स्टोरेज भरियो ? यसरी खाली गर्नुस् फोनको स्टोरेज
Technology Khabar २१ कार्तिक २०७८, आईतवार
तिहार र दिपावलीको अवसरमा साथीभाई र परिवारसँग रमाइलो गर्दै तपाइँले पूजा गर्ने, दियो बाल्ने र भाईटिका गर्ने, देउसी भैली खेल्ने लगायत लगभग सबै क्षणहरू आफ्नो स्मार्टफोनमा कैद गर्ने प्रयास गर्नुभएको होला। यसपछि तपाईको फोनमा स्टोरेज फुल हुने वा त्यसैले ह्याङ्ग हुने समस्या आएको हुन सक्दछ।
अहिलेका फोनहरूमा उच्च रिजोल्युसनयुक्त फोटोहरू र फुल एचडी वा फोरके भिडियो रेकर्डिङ छन्। यससँगै व्हाट्सएपमा बधाई सन्देशको फोटोहरूले फोनको भण्डारण पनि भर्छ र फोन ह्याङ्ग हुने संभावना धेरै हुन्छ।
यी कारणले तपाईँको फोनमा स्टोरेजको समस्या हुन सक्नेछ। त्यसैले आज यहाँ हामी फोनको स्टोरेज व्यवस्थापनको बारेमा जानकारी दिँदैछौं।
नचाहिने एपहरू मेटाउनुहोस्
यदि तपाइँ फोनमा स्टोरेज खाली गर्न चाहनुहुन्छ भने, त्यसोभए ती एपहरू मेटाउनुहोस् जसले धेरै ठाउँ लिइरहेको छ र जुन तपाइँ कहिलेकाहीं मात्र प्रयोग गर्नुहुन्छ।
फोटो र भिडियोहरू मेटाउनुहोस्
फोन ग्यालरीमा गएर फोटो र भिडियोहरू जाँच गर्नुहोस्। अनावश्यक फोटो र भिडियोहरू मेटाउनुहोस्। व्हाट्सएपमा अनावश्यक फोटो र भिडियोहरू पनि मेटाउनुहोस्। यदि तपाईंले दैनिक ह्वाट्सएपबाट फर्वार्ड गरिएका भिडियो र फोटोहरू डिलिट गर्नुभयो भने, धेरै ठाउँ बचत हुनेछ।
फाइल संलग्न गर्नुहोस्
इमेलसँग जोडिएका फाइलहरू डाउनलोड हुँदा फोनमा नै सुरक्षित हुन्छन्। र यी फाइलहरूले हाम्रो फोनमा पनि धेरै ठाउँ ओगटेका छन्। त्यसैले अनावश्यक संलग्न फाइलहरू मेटाउनुस्।
क्यास खाली गर्नुहोस्
फोनमा स्पेस कायम राख्न चाहनुहुन्छ भने क्यास क्लियर गरिरहनुपर्छ। एन्ड्रोइड स्मार्टफोनका प्रयोगकर्ताहरूले सेटिङमा गएर क्यास क्लियर गर्न सक्छन्। क्यास क्लियर गर्नाले स्मार्टफोनको स्टोरेज पनि केही हदसम्म बढ्छ। क्यास मेटाउन, धेरैजसो एन्ड्रोइड उपकरणहरूमा, तपाइँ सेटिङहरू> स्टोरेज> मा जानुहोस् र क्यास डाटा (Cached data )को विकल्पबाट मेटाउन सक्नुहुन्छ।
गुगल फोटोज प्रयोग गर्नुहोस्
गुगलमा जिमेल आईडी बनाउनको लागि १५ जीबी स्टोरेज उपलब्ध छ। जसमा उच्च गुणस्तरका फोटो र भिडियोहरू ब्याकअप गर्न सकिन्छ। फोन स्टोरेज घटाउन, गुगल फोटोज एपमा स्वचालित ब्याकअप विकल्प खोल्नुहोस्। जब सबै डाटा ब्याकअप हुन्छ, ‘फ्री अप स्पेस’ विकल्पमा ट्याप गर्नुहोस्। यसको मद्दतले तपाईको फोनमा रहेका सबै एपहरु डिलिट हुनेछन् ।
यदि तपाइँ चाहनुहुन्छ भने, तपाइँ मेमोरी कार्डलाई फोनको आन्तरिक स्टोरेजमा पनि रूपान्तरण गर्न सक्नुहुन्छ।
प्रकाशित: २१ कार्तिक २०७८, आईतवार
ग्राफिक कार्ड के हो थाहा पाउनुहोस्, यसले कसरी ल्यापटप गेमिङ्गलाई फास्ट बनाउँछ बुझ्नुहोस्
तपाईंले फोन हराउनुभयो वा कसैले चोर्यो, त्यसोभए अपनाउनुस् यो सजिलो फाइदाजनक उपाय
फोनको खराब सिग्नल र वाईफाईले समस्या दियो, यसरी गर्नुस् समाधान